Ungaqala kanjani ibhizinisi lakho le-nail? - Izindaba - Shanghai HUIZI digital
Ungaqala kanjani ibhizinisi lakho le-nail?
Isikhathi: 2021-06-07 Ukushaya: 12561
Ngokukhuphuka kwegagasi lezamabhizinisi, abantu baqala ukucabanga ngendlela yokwakha amabhizinisi abo.Kodwa ukuqala ibhizinisi kuyinkqubo eyinkimbinkimbi edinga umzamo omkhulu, ukuzethemba, nokuguquguquka kwesimo. Asikho isixazululo esisodwa esiqinisekisa impumelelo ngokushesha, kepha usengathola ukuholwa okukhethekile okuzokusiza ekushintsheni nasekuguqukeni kwenqubo edingekayo., sixoxa ngokuthi ungaqala kanjani i-nail salon - kufanele uhlele kusengaphambili, ulungiselele uhlelo lwebhizinisi, ukuthi ungabiwa kanjani isabelomali, uthinte iklayenti lokuqala, njll.
Ikakhulu, imboni yezipikili iyakhula, njengoba amaklayenti efuna izindlela ezihlukile zokuziveza abangazibonisa ngazo, futhi bazithokozise ngokutotosa okuthe xaxa esontweni labo elimatasa.
Ngakho-ke, njengoba umncintiswano ulungiselela, manje manje yisikhathi esihle ngempela sokuqala ibhizinisi lakho lezipikili? Ithuba likhona - kodwa, kufanele uzimisele ukulisebenzela! Ukuqala ibhizinisi lakho le-nail kudinga ukucabanga okuningi, ucwaningo nokuqeqeshwa uma ufuna ukuliphumelela.Kulabo abacabanga ngalo, sihlanganise umhlahlandlela ogcwele imininingwane yokuthi ungalisungula kanjani ibhizinisi lakho le-nail kusuka ekhaya…
Cabanga ngayo yonke imiphumela ngaphambi kokuqala
Ngaphambi kokuba uqale ukuzibandakanya futhi uqale ukutshala imali, kuwukuhlakanipha ukuqinisekisa ukuthi uyazi ukuthi uzifaka kuphi. Ngokwezibalo ezethulwe yiThe Telegraph, ngesikhathi sekhefu lango-2019, ama-60% amabhizinisi asanda kusungulwa avale kungakapheli iminyaka emithathu, kuthi ama-20% aqhubeke ngaphansi kwezinyanga eziyishumi nambili nje zokuqala zokusebenza. Izipikili ze-Nail azivamisile ukuletha imishayo emikhulu yenzuzo, okungenani hhayi ngokushesha. Inzuzo yabo incike kakhulu ekusebenzeni kwabasebenzi babo futhi iqiniso elinzima ukuthi - amaklayenti amaningi awafuni ukukhokha ukuthi yiziphi izaluni zezipikili ezidinga ukukhokhisa ukuze zibe nenzuzo. Njenganoma yiliphi ibhizinisi embonini yezobuhle, bathinteka kakhulu ukwehla komnotho - futhi njengamanje, kufanele bancintisane nokukhuphuka kwesiko le-DIY elinikeza abantu bansuku zonke ithuba lokwenza insizakalo ngemali ephansi.
Ngabe kusho ukuthi akufanele uvule ibhizinisi lakho lezipikili? Cha! Uma uwethemba umqondo wakho webhizinisi futhi usesimweni sokubeka engcupheni leyo, kufanele impela ukubhekelelwa. Kodwa-ke, kufanele uqaphele ubungozi futhi ungenzi isinqumo ngokuxhamazela. Kufanele futhi ugxile kakhulu odabeni lokuthi ungalakha kanjani ibhizinisi le-nail eletha amanani amakhasimende empeleni azimisele ukuwakhokhela.
Lapho sikhuluma ngokuqala ibhizinisi lezipikili, into yokuqala efika engqondweni yi-salon yezipikili.Singakwazi ukubala izindleko nezindleko ezingaphambili zokuvula i-nail salon.
ü Ukuthengwa kwempahla eluhlaza
ü Izindleko zabasebenzi
ü Umhlobiso weSalon
ü Kwenyusa lizinga
Lapha simane sibala utshalomali lokuqala, okusobala ukuthi alunabungane kakhulu kubaqalayo, utshalomali lukhulu kakhulu futhi nomjikelezo wokubuyisela umude, kanti kumakhasimende, i-manicure izothatha isikhathi eside. Ngakho-ke udinga ukuthatha konke lokhu izici okufanele uzicabangele ngaphambi kokuqala.
Ingabe ikhona indlela enhle yokuxazulula inkinga yomthandi wezipikili ofuna ukuqala ibhizinisi kodwa engenayo imali eyanele? - Imichilo ye-manicure.Kweminyaka embalwa nje, imichilo yezicucu zikhule zaba ngosayizi ophikisana ne-nail polish, ngakho-ke ake sicabange ngezindleko zokuqala ibhizinisi lokugoqa izipikili.
ü Qasha --- Ungakwenza ekhaya
ü Izinsiza kusebenza - Ngokuyisisekelo Cha
ü Ukuthengwa kwempahla eluhlaza - Imichilo ye-Nail polish
ü Izindleko zabasebenzi-- Wena uqobo
ü Umhlobiso weSalon-- Cha
ü Ukukhuthaza ---- Online
Kulokhu siyabona ukuthi izindleko zebhizinisi le-manicure zilungiswa ekuthengeni nasekukhangiseni, okuzokonga imali eningi.
Kodwa-ke, i-salon yezipikili nebhizinisi le-nail patch alishayisani, futhi i-nail patch iphinde inikeze indlela entsha yokucabanga nge-salon. I-manicure yendabuko ithatha isikhathi eside, ngakho-ke i-nail patch ingaxazulula le nkinga ngokuphelele.Futhi zonke izinhlobo zamaphethini eziyinkimbinkimbi zingakhonjiswa ngokuphelele kunamathisela wezipikili, amakhasimende angakhetha ngokukhululeka.
Hlela uhlelo lwebhizinisi
Ukuhlela kuyisihluthulelo sokwenza impumelelo yebhizinisi lakho elisha le-nail!
Ukubhala uhlelo lwebhizinisi olucatshangwe kahle kufanele kube yinto ephambili ngaphambi kokuthatha ezinye izinqumo. Kubaluleke kakhulu futhi uma ufuna ukuzama ukuthola imali noma imalimboleko yokuqalisa kwakho.
Zama futhi ugcine uhlelo lwakho lwebhizinisi lufushane, ukwenze kucace ukuthi liyini ibhizinisi lakho, lizokwenza kanjani imali, nezinyathelo ozozithatha ukufeza lokhu.
Kubalulekile ukufaka uhlelo lwezezimali, futhi. Zibekele isabelomali esiyiqiniso sakho konke okuphumayo kanye nenzuzo ozohlose ukuyizuza.
Ø Uhlelo Lokuthenga
Ø Uhlelo lokumaketha nokukhuthaza
Ø Uhlelo lwezezimali
Qala ukwakha amakhasimende net
Zama ukuzakhela iwebhusayithi yakho enegama lomkhiqizo.
Ifuna i-nail ethe xaxa stickers izimpahla zokuqala ibhizinisi lakho le-nail? Izimonyo zaseShanghai Huizi kungaba inketho engcono kakhulu
Qhubeka ufunde ku IHuizi International blog ukuthola okuningi ibhizinisi iseluleko
Okwedlule: Ingabe Izingane Zingaba Nobuciko Be-Nail?
Okulandelayo: Inguquko yenzeke ku-Nail Wraps